facebook Archives | Kendrabindu Nepal Online News
काठमाडौं । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना तथा प्रविधि सम्बन्धि विधेयक बहुमतबाट पारित गरेको छ । आइतबारको समिति बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोधकाबीच विधेयक बहुमतबाट पारित गरेको हो । समिति सभापति कल्याणी खड्काले विधेयक नियमावली अनुसार पारित
१३ पुष २०७६, आईतवार १५:०४	१३ पुष २०७६, आईतवार १५:०४
काठमाडौं । वैज्ञानिक तथा सामाजिक अभियन्ता महावीर पुनले सामुदायिक पर्यटनको विकासको लागि सामाजिक सञ्जालमार्फत ऋण सहयोगको अपिल गरेका छन् । उनले आफ्नो फेसबुकमार्फत ग्रामीण समुदायको विकास र अर्को राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको ‘म्यानुफ्याक्चरिङ’का लागि नरम हृदय भएका विश्वभरका नेपालीहरूसँग तीन करोड
२ पुष २०७६, बुधबार ११:०२	२ पुष २०७६, बुधबार ११:०२
एजेन्सी । फेसबुकलाई ठूलो झट्का लागेको छ । अमेरिकाको निकै लोकप्रिय अनलाइन भुक्तानी कम्पनी पेपल होल्डिङ्सले फेसबुकको अग्रसरतामा गठन भएको लिब्रा एसोसिएसनबाट बाहिरिने घोषणा गरेसँगै फेसबुकलाई झट्का लागेको हो । फेसबुकको अग्रसरतामा रहेको डिजिटल मुद्रा परियोजनाका २८ वटा सदस्यमध्ये पेपल
१९ आश्विन २०७६, आईतवार ०७:३७	१९ आश्विन २०७६, आईतवार ०७:३७
एजेन्सी । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले दशौं हजारौं एपलाई निलम्बित गरेको छ । आफ्ना प्रयोगकर्तासँग सम्बन्धित डेटा चोरी हुनेगरी भएको केम्ब्रिज एनलिटिका काण्डपछि फेसबुकले दशौँ हजार एपलाई निलम्बन गरेको हो । सन् २०१८ मा केम्ब्रिज एनलिटिका नामक कम्पनीले बिनाअनुमति धेरै फेसबुक
४ आश्विन २०७६, शनिबार २०:१०	४ आश्विन २०७६, शनिबार २०:१०
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले दशौँ हजार एप्स हटाएको छ । सन् २०१८ मार्चको केम्ब्रिजको विश्लेषणात्मक तथ्याङ्कका कारण फेसबुकले अध्ययनका लागि ती एप्सलाई निलम्बन गरेको कम्पनीले शुक्रबार जनाएको छ । निलम्बनमा परेका एप्समध्ये झण्डै चार सय ओटा निर्माता छन् । आफ्ना प्रयोगकर्तासँग
४ आश्विन २०७६, शनिबार १५:३६	४ आश्विन २०७६, शनिबार १५:३६
एजेन्सी । हामी फेसबुकलाई सूचना आदान प्रदानको साधन मान्छौं । तर फेसबुकले तपाई हाम्रा कैयौं गोप्य डाटा पनि संकलन गर्ने गरेको छ । जुन अति नै गोप्य तरिकाले गर्छ । फेसबुकले एकातिर तपाईको व्यक्तिगत जानकारी, गोप्य सूचना, म्यासेज तथा तस्बिरहरू
२५ भाद्र २०७६, बुधबार १८:०२	२५ भाद्र २०७६, बुधबार १८:०२
कृष्णसिंह धामी काठमाडौं । मेरो मोवाइलमा बिहान ४ बजेर १३ मिनेटमा एउटा म्यासेज आएको थियो । जुन मैले बिहान ७ बजेतिर मात्र देखेँ । त्यो म्यासेज सिन गर्दा मेरो दिमाग निकै तात्यो । नतातोस् पनि किन नाइँ, त्यो म्यासेजले मेरो
१३ भाद्र २०७६, शुक्रबार ११:०५	१३ भाद्र २०७६, शुक्रबार ११:०५
फेसबुकलाई साढे ५ खर्ब रुपैयाँ जरिवाना
एजेन्सी । अमेरिकाले फेसबुकमाथि पाँच अर्ब डलर जरिवाना तोकेको छ । फेसबुकमाथि डाटा गोपनीयता उल्लंघन गरेको अभियोगबारे जाँच गरिरहेको कमिटीले पाँच अर्ब डलर अर्थात पाँच खर्ब ४७ अर्ब भन्दा रुपैयाँ बढी रकम जरिवाना तिराउन अनुमति दिएको हो । सोसल मिडिया
३० असार २०७६, सोमबार १२:०४	३० असार २०७६, सोमबार १२:०४
फेसबुक चलाउँदा यी गल्ती गरे १५ लाखसम्म जरिवाना !
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा कडाई गरिने भएको छ । त्यसको लागि सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक तयार पारिएको छ । उक्त विधेयक संसदको विकास तथा प्रविधि समिति अन्तर्गतको उपसमितिले बहुमतले पारित गरेको छ । उक्त विधेयकमा साइबर बुलिङ दण्डनीय बनाएको छ
२९ जेष्ठ २०७६, बुधबार १५:१९	२९ जेष्ठ २०७६, बुधबार १५:१९
शिक्षकहरुले फेसबुक चलाउँदा यी कुरामा ध्यान नदिए फसिएला !
काठमाडौं । केही समय अघि सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीको तस्बिर पोष्ट गर्दा एक प्रधानाध्यापक पक्राउ परे । फेसबुकमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको फोटो बिगारेर अपशब्दसहितको स्टाटस पोष्ट गरेको आरोपमा मेलम्ची नगरपालिका–१३ स्थित फटकशिल माविका प्रधानाध्यापक इश्वरकुमार चौलागाईं पक्राउ परेका थिए । प्रधानाध्यापकले
२७ जेष्ठ २०७६, सोमबार १३:०६	२७ जेष्ठ २०७६, सोमबार १३:०६
फेसबुकले ६ महिनामा ३ अर्ब फेक अकाउन्ट हटायो
एजेन्सी । फेसबुकले ६ महिनाको अवधिमा ३ अर्ब भन्दा धेरै फेसबुक अकाउन्ट हटाएको छ । सन् २०१८ को अक्टोबर महिनादेखि सन् २०१९ को मार्च महिनासम्मको अवधिमा फेसबुकले फेक अकाउन्ट हटाएको हो । त्यसमध्ये १ अर्ब २० करोड अकाउन्ट सन् २०१८
१३ जेष्ठ २०७६, सोमबार १९:२५	१३ जेष्ठ २०७६, सोमबार १९:२५
फेसबुकपछि इन्स्टाग्रामबाट ४ करोड ९० लाखको डाटा चोरी
एजेन्सी । अहिलेसम्म हामीले फेसबुक ह्याक गरिएको भन्ने सुन्दै आएका छौं । फेसबुक ह्याक गरेर महत्वपूर्ण दस्ताबेज पनि लिक हुने क्रम कुनै नयाँ घटना होईन् । तर ह्याकरले इन्स्टाग्रामलाई निै निशानामा पारेका छन् । इन्स्टाग्रामबाट विभिन्न डाटा चोरी भएका छन्
८ जेष्ठ २०७६, बुधबार १३:१२	८ जेष्ठ २०७६, बुधबार १३:१२